Ithegi: iinethiwekhi zentlalo | Martech Zone
Ithegi: iinethiwekhi zentlalo
NgoLwesine, Aprili 3, 2014 NgoLwesithathu, Aprili 2, 2014 Douglas Karr
Isiseko esiKhumbuzayo sisixhobo ekulula ukusisebenzisa esizisa uhlobo lophando kugcino kwi-intanethi kwaye ikuvumela ukuba unxibelelane nabaphulaphuli bakho ukuze uqonde ukuba kutheni abaphulaphuli bakho becinga kwaye besenza njengoko besenza kwaye bafumanise ukuqonda okutsha nokwenzekayo kwishishini lakho. Ababukeli baquka abathengi bakho, abasebenzi, amalungu, abatyali mali, abafundi kunye neenethiwekhi zentlalo. Isiseko sokukhumbula kwakhona sizisa inkqubo yokuvavanya isimilo kunye nokuphendula ngokweemvakalelo ngokwamaqela ekugxilwe kuwo ngabantu kwi-intanethi kwaye ikunike ukufikelela
NgoMgqibelo, Oktobha 13, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Sinomthengi kwishishini leinshurensi yokuhamba owenza umsebenzi omangalisayo wokudibanisa imithombo yeendaba zentlalo ukukhulisa ishishini labo. Ngokuba yindawo entle yokuhamba yeendaba zokuhamba kunye neengcebiso, baqhubekekile bekhulisa ukukhula. Bakhokelwa nguBryant Tutterow kunye noMuhummad Yasin, simangalisiwe yindlela iqela labo elinemveliso kwaye elinemveliso ngayo kwimakethi elawulwa kangaka. Unxibelelwano lwasentlalweni kunye nokuphononongwa komsebenzisi kunokuba nefuthe elinamandla kwizigqibo zokubhukisha